Shaqo joojinta hoteelada iyo maqaayadaha oo baaqatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqo joojinta hoteelada iyo maqaayadaha oo baaqatay
La daabacay måndag 11 juni 2012 kl 13.32
wada xaajood dheer oo soo jiitamayey dhamaan dhamaadka asbuuci hore ayey heshiis is afgarad ah gaareen ururka shaqaalaha ka howl gala hoteelada iyo maqaayadaha HRF iyo shaqobiyaasha Visita maanlintii axada ahayd. Taas waxay ka micno tahay in ay meesha ka baxday shaqo joojintii iyo shaqo ka xirintaankii ay labada dhinac iskugu goodiyeen
- Aad ayaan ugu faraxsanahay in aanan yeelin qorshahii heshiiska shaqo-barida ahaa ee ay dhanka kale doonayey, ayey teri Malin Ackholt oo dhanka heshiisyada u qaabilsan HRF.
Heshiis shaqo-barid ayaa ahaa wax uu ururka shaqo bixiyaha hoteelada iyo maqaayadaha dalbanayey taas oo ka micno noqon lahayd mushaar dhimid u dhiganta 25% oo lagu sameeyo shaqaalaha ay ka yar tahay da'dooda 25-sanno.
Heshiishka cusob ayaa jiri doona hal-sanno, waxa uu qosayn doonaa 620 000 oo shaqaale kaas oo kordhinaya mushaarka ugu hooseeya 620 koron bishii.
- Dadka ka tirsan ururkayaga waxay jeclaan lahaayeen mushaar intaas ka badan iyo amni shaqo oo fiican. Balse waxaan ku guulaysanay in aan intaan u soo hoyno, waxii hada ka bilowdana waxaan ka sii shaqaynayaa heshiiska sannadka soo socda, ayey tiri Malin Ackholt.